၂၀၁၁ သြဂုတ် ၆ ရက်နေ့ရ SINGAPORE အလုပ်အကိုင်သတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ၂၀၁၁ သြဂုတ် ၆ ရက်နေ့ရ SINGAPORE အလုပ်အကိုင်သတင်း
၂၀၁၁ သြဂုတ် ၆ ရက်နေ့ရ SINGAPORE အလုပ်အကိုင်သတင်း
Posted by manawphyulay on Aug 6, 2011 in Business & Economics, Jobs & Careers |7comments
PIPE FITTER / STEEL FITTER
HIGH LEVY $ 18 ~ 20 + OT
LOW LEVY (MARINE) $ 24 ~ 26 + OT
HOUSING PROVIDE (အင်တာဗျုးအတွက် သင်တန်းများကို အခမဲ့ပေးနေပါသည်)
မှတ်ချက် ။ ။ ၀န်ဆောင်ခအပြည့်မတတ်နိုင်သူများအတွက် အကြွေးစနစ်ဖြင့် ၀န်ဆောင်ခပေးနေပါသည်။
INTERVIEW DATE THIRD WEEK OF AUGUST
SALARY S$ 2000
WORKING HRS 10HRS PER DAY
REST DAY SUNDAY OFF
3-5 YEARS FIELD EXPERIENCE (HYDRAULIC OR ELECTRICAL MARINE EQUIPMENT)
CAR POLISHING GENERAL (S-PASS)
WORKING HRS 12HRS PER DAY
REST DAY ONE WEEK ONE DAY OFF
ELECTIRICAN (BASIC ELECTICAL) (S-PASS)
SALARY S$1000 + ACCOM
WORKING HRS 12 HRS PER DAY
REST DAY FOUR DAYS OFF PER MONTH
SUPERMARKET (SALE & GENERAL) (S-PASS)
SALARY S$1150 + ACCOM
WORKING HRS 14 HRS PER DAY
REST DAY TWO DAYS OFF PER MONTH
WORKING HRS 9AM TO 6PM
OT ($5PER HOUR)
CARTON BOX FACTORY(S-PASS)
WORKING HRS 10HRS PER DAY + MEAL TIME
OT ($4.5PER HOUR)
ဆက်သွယ်စုံစမ်းရန် ၀၉၇၃၀၅၀၆၀၃ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
SGD 2000 မရပဲနဲ့ SPASS လျှောက်ရင်ရနိုင်လို့လားခင်ဗျာ… သတင်း တင်ပေးတဲ့လူကို မယုံကြည်လို့ မေးတာမဟုတ်ပါဘူး… ကိုယ့်မြန်မာတွေ Bully အလုပ်ခံရမှာ စိုးလို့ပါ…
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး… ဒီလောက်အလုပ်ချိန်များပြီးတော့ လစာဒီလောက်နည်းတဲ့အလုပ်ကို ကိုယ့်မြန်မာတွေလုပ်နေရတာ… SG’s MOM ကလည်း ဒါမျိုးအလုပ်တွေကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာ အရမ်းကြီးကို ဆိုးလွန်းတယ်ဗျာ
ဒီလိုရှိတယ်ဗျ.. MOM ကတော့ အခြေခံ ၂၀၀၀ ပေးမှ S’pass ချပေးတာ.. ပိုင်ရှင်တွေက တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဈေးပေါတယ်၊ အလုပ်မရှိဘူးဆိုတာသိလို့ရယ်၊ ခိုင်းကောင်းလို့ရယ်ဆိုပြီး ငါတို့က ဒီလောက်ပဲ ပေးမယ်၊ လုပ်နိုင်ရင် လုပ်ပေါ့ဆိုပြီးခေါ်တာလေ.. ပိုင်ရှင်တွေဘက်ကကျတော့ နှစ်သီးစားပေါ့၊ လုပ်ငန်းခွန်ဆောင်ရင် ၀န်ထမ်းလစာနည်းနည်းလေးပဲပေး၊ အချိန်အများကြီးလဲ ခိုင်းစားရတယ်ဆိုပြီး အလုပ်လာခေါ်ကြတာ၊ ယိုးဒယားဆိုရင် WP တောင်မှ သူ့နိုင်ငံသား တစ်ရက် ၂၅ ကျပ်မပေးရင် မခေါ်နဲ့ပြတ်ပြတ်ပြောထားတာ.. မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတော့ အရင်က ရွှေလို့ ခေါ်ခဲ့ကြပေမယ့် ခုတော့ ရွှေက ရွှေတုံးမှ မဟုတ်တာ.. ရွှေချရုံပဲချထားတာ.. ကွာသွားတော့ ဒုံရင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့.. ဒီလောက်ပဲရေးတော့မယ်.. ဒါတွေပြောရင် ဒေါတွေပါလာလို့
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက အမှန်တစ်ကယ် ၁၀၀၀-၁၃၀၀ လောက်ပဲရပေမဲ့ စလုံးအစိုးရကို ၂၀၀၀ နဲ့အခွန်ဆောင်… လုပ်ငန်းရှင်တွေက အခွန်လွတ် Black Money တွေ အလုပ်သမားတွေဆီက ပြန်ရ… အင်း…. နောက်ဆုံးတော့လည်း ပြည်တွင်းမှာလဲခံရ၊ ပြည်ပမှာလဲခံရ… အခံရဘက်ကကြီးပါပဲလားနော်
အမှန်တကယ်အားဖြင့်ကတော့ စင်္ကာပူ SPASS အတွက် သတ်မှတ်ထားတာက အနည်းဆုံးလစာ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာကတော့ ဒီလိုမျိုးအပြည့်ပေးတဲ့ အခြေအနေမျိုးက သိပ်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်သူတွေအတွက်ပဲရနိုင်ပါတယ်။ အပြည့်ပေးပြန်တော့လဲ တာဝန်သိပ်ကြီးပါတယ်။ စင်္ကာပူတွေက လူလည်တွေပါ။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအခြေအနေမှာက ဒိလောက်ပေးရင်လဲဖြစ်နေတာမို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲအလုပ်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက တရားဝင်လို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ စင်္ကာပူအေးဂျင့်တွေ၊ အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ မြန်မာအေးဂျင့်တွေ လက်ဝါးရိုက်ထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မနောက သတင်းပေးချင်းသက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေနေသူတွေလဲရှိပါတယ်။ အဆင်မပြေပဲပြန်လာရသူများလဲရှိပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေမကောင်းလို့ ဒီလိုလုပ်ရတာလို့ပဲမြင်ပါတယ်။ ဒိထက်ဆိုးတဲ့ အိမ်ဖေါ်အလုပ်တွေ၊ အလုပ်ကြမ်းသမားတွေ၊ ဆေးသုတ်သမားတွေရှိပါသေးတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတာတောင် အလုပ်ရဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ၁၀ ယောက်လျှောက်ရင် ၈ ရောက်လောက်က Reject ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက် သတင်းပိုလိုသေးတယ်ဆိုရင်ဖုန်းကိုထပ်မံမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဘက်ကလဲ ခပ်တင်းတင်းပါပဲ။ မကြိုက်ရင်မလာပါနဲ့တဲ့လေ။
အင်း… ၀ယ်လိုအားတွေ အရမ်းများနေတယ် ထင်ပ…
အခြေခံလစာ … July လ ကစလို့ 2000S$ ကိုတက်သွားပါပြီ Singapore မှာအလုပ်လျှောက်ချင် သူများ အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ Link မှာ pass အကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖတ်နိုင်ပါတယ် … အဓိကကတော့နိုင်ငံခြားသား ဦးရေကိုလျှော့ချတာလဲပါတာပေါ့ … pass လျှောက်လို့ အနည်းဆုံး လစာ ကို 2000S$ မထည့်ရင် Reject ဖြစ်ဖို့ 99% ပဲ ဒါတောင် ရထားတဲ့ Cert တွေ Degree တွေ Experience တွေ နဲ့အလုပ်လျှောက်တဲ့ Post မကိုက်ညီရင် Reject ဖြစ်နိုင်ပါတယ် Company မှာလဲ quota ရှိဦးမှ… Agent တွေကလဲ အလုပ်မဖြစ်သေးရင် သာ ချိုချိုသာသာ ပြောတတ်ကြတာ … အလုပ်လဲရ Pass လဲကျ ပိုက်ဆံလဲရပြီးရင် … အဆင်မပြေဘူးသွားပြော မျက်နှာလွှဲခဲပြစ် လှည့်တောင်မကြည့်တော့ဘူး